Inhloko zeNdaba Ntulikazi 04, 2019
Ntulikazi 04, 2019
****** Umongameli Emmerson Mnangagwa kanye lomkhokheli webanda eliphikisayo ele MDC, uMnu. Nelson Chamisa bathumele amazwi wokwenzela iMelika amhlophe ngelanga lokuthakazalela uzibuse elikamhla ka 4 Ntulikazi.
********** Abaphila legciwane lengculaza abeZimbabawe, abavele kumagumbi amane elizwe batshengisele ngokuhlala enkundleni eye Africa Unity Square bucwadlana nje, ledale lePhalamende njengendlela yokubonisa amalunga aleli dale lohulumende ngokuqakatheka kwezikhalazo ezethulelwe uMlawuli walo ezenkinga ababhekane lazo.
********** Abekhomishini ebona ngendaba zenkohalakalo eye Zimbabwe Anti – Corruption Commission ( ZACC ) baxwayisa bonke abaphatheke kumkhuba wenkohlakalo ukuthi bazobotshwa bengafunyanwa belecala.
************ Iqembu elimmela iZimbabwe edlalweni wokugaqa ngezandla oweNetball lisukuma namhlanje lilubhekise eNgilande emncintisweni wenkezo yamazwe womhlaba eye 2019 World Cup
********** KuLiveTalk namhlanje kuhlelo “Asiyihluzeni Bomama” sikhangela okubhekae labesifazana ngalezi zikhathi zobunzima ngenxa yokonakala kwesimo somnotho kanye lokuphumelela kweqembu elimmela I Zimbabwe emdlalweni wokugaqa oweNetball ukuya emncintisweni wenkezo yamazwe womhlaba eye 2019 World Cup. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani imlayezelo kunombolo ezithi 0012024650318. Lingakhuthwa yilezindaba lezinye kuStudio 7 ngo half past 7 ntambama lango half past 6 ekuseni, kumagagasi athi 909 am, 4930, 15580 laku 6080 kilohertz kuShortwave.